UNgcobo yinhlansi yethemba ebumnyameni kwiChiefs - Impempe
UNgcobo yinhlansi yethemba ebumnyameni kwiChiefs
May 20, 2021 May 20, 2021 Impempe.com
Ebumnyameni obubhekene neKaizer Chiefs kule sizini ka-2020/2021 uNkosingiphile Ngcobo ungomunye wabadlali abambalwa abaletha ukukhanya kuleli qembu laseNaturena.
Lo mdlali oneminyaka engu-21 uyibamba ngenxele adlule eshwibeka emadodeni amadala. Futhi uselithwale kaningi iqembu kwiDStv Premiership nakwiCAF Champions League.
UNgcobo usewine umklomelo womdlali wenyanga oshaye into ecokeme kwiChiefs, iPlayer That Has it All, ehambisana nemoto yakwaToyota, iCorrolla entsa ceke azoyisebenzisa izinyanga ezine, kwaze kwakabili. Uthi lokhu kumnika umdlandla wokuqhubeka nokusebenza kanzima yize izinto zibhimba kuleli qembu elilolongwa nguGavin Hunt.
“Ngiyajabula kakhulu ngokuthola imoto ngokuba umdlali wenyanga. Kumnandi futhi kuyajabulisa, kuyasigqgquzela njengabadlali. Sifuna ukuncintisana kakhulu kunakuqala. Ngicabanga ukuthi yinto enkulu kakhulu lena futhi iyasikhuthaza,” kusho uNgcobo.
Siyiqembu asenzanga ngendlela
ebesifisa ngayo kodwa kuningi okuhle
Akukho ukungabaza ukuthi iChiefs ifisa ukusheshe iyikhohlwe le sizini. Nokho uNgcobo noma efuna ukuyikhohlwa angabuye aduduzwe ukuthi ujitshwe emphandweni wezingonyama, wakwazi ukulwa nazo.
“Ngicabanga ukuthi leli kube yithuba elikhulu, futhi ngicabanga ukuthi silisebenzisile ukuqinisekisa ukuthi sisebenza kanzima, sifake isandla endleleni elidlala ngayo iqembu. Kube yisizini enhle kwabanye bethu, ikakhulukazi abadlali abasebancane.
“Siyiqembu asenzanga ngendlela ebesifisa ngayo kodwa kuningi okuhle. Ukuqhubekela phambili ngicabanga ukuthi sizokwenza kangcono,” kusho uNgcobo. Lo mdlali isizini iyamvuma ngempela ngoba useke wafakwa eqenjini lesonto (team of the week) kwiCAF.
“Ukudlala kwiCAF kungenze ngakhula njengomdlali kanjalo neqembu lonke. Isinike inselelo ehlukile futhi ngicabanga ukuthi senza kahle kakhulu. Sidinga ukulokhu sikhula umdlalo nomdlalo.” Ngabe kube lula kangakanani kuNgcobo ukuthi angene eqenjini elikhulu bese ayibambe eshisa njengoba enza?
Basifundise sisesenkulisa ukuthi kumele
siqine nokuthi uma sisenkundleni senze
konke okusamandleni ethu
“Basifundise sisesenkulisa ukuthi kumele siqine nokuthi uma sisenkundleni senze konke okusamandleni ethu. Ngesikhathi sinyuselwa eqenjini elikhulu kwakungelukhuni kodwa kwakumele siqhubeke nokusebenza kanzima silalele nokushiwo umqeqeshi,” kusho uNgcobo.
iChiefs izobhekana neSimba SC emdlalweni womlenze wesibili weChampions League ekuhambeni ngale mpelasonto. Emlenzeni wokuqala kuwine iChiefs ngo 4-0 kodwa uNgcobo uthe kumele bazimisele baqedele abakuqalile.
“Sikwenzile okufanele ekhaya kodwa kumele siye laphaya senze isiqiniseko sokuthi siyawusonga umdlalo. Kumele sigxile kumalungiselelo ethu, bese uma sifika laphaya senze lokho esikuhlelile ukuze sibuyele ekhaya sijabulile,” kuphetha uNgcobo.
Previous Previous post: Ubuyela emgwaqeni umjaho okhula ngamandla Ethekwini
Next Next post: Ususe umsindo uSirino ngesithombe sejezi le-Al Ahly